कथा : प्रतिज्ञा
2079-Jestha-28 || मध्यान्ह
– रुक्मिणी शर्मा, असम, भारत ।
भाविको लेखन कसले पो टाल्न सक्छ र ? कसै गर्दा मन बुझाउन सकिदैन । हिजोसम्म सपरिवारले परिपूर्ण भएको रत्ने दाईको घरमा आज चारैतिर निःस्तब्ध छ । कसैको मुखबाट एउटा शब्द पनि निस्केको छैन । रत्ने दाई दुई/चार दिनदेखि अलिक बिरामी भएका थिए । असारको महिना मुठि खाएर मानो कमाउने बेला । उनीहरुको वर्ष दिनको खोराकी, चाडवाडको खर्च, तेल–नुन खाने, नानीहरूलाई स्कूल पढाउने, लुगाफाटा आदि सबै थोकको खर्च त्यही खेतको धानले पु¥याउनुु पर्ने थियो । र खेति उठाएर मात्र अस्पताल जान्छु भन्दै घरमै जुवानाको झोल, तुलसी पातको रस, नीम पत्ताको गोली एस्तै के–के औषधि बनाएर खादै खेतमा काम गर्ने गर्दछन् । कहिले सन्चो हुन्छ कहिले हुँदैन यस्तै चलिरहेको थियो । जसै तसै खेति उठाएर अस्पताल जँचाउन भन्दै छोरीको साथ लागेर गए ।
डक्टरले मिर्गौला, मुटु र सुगरको जाँच गर्नुपर्छ, अनि मात्र औषधि दिइन्छ भने । उनीहरूले जाँच गराउछन् तर, बिरामीको केही पत्तो लाग्दैन । दुई÷चार थोक भिटामिन, ग्याष्ट्रिकको औषधि दिएर डक्टरले भन्छन्, “यति खाए पछि जाति हुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन ।” डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधि लिएर घर फिर्ता हुन्छन् । औषधि खाँदा पनि बिरामीलाई राम्रो भएको छैन । रत्नेलाई झन् शरिर कमजोर लाग्न थाल्यो, खाने कुराको कोही स्वाद आउदैन हात खुट्टा चल्न छोडे ।
त्यो दिन शनिबार थियो, साँझ पर्दै गयो रत्नेदाईको टाउको सहन नसक्ने गरि दुख्न थाल्यो । ज्वरो बेस्सरी आयो । सेक, ताप गरेर जसै तसै उज्यालो भयो र आमा छोरी भएर अस्पताल लिएर गए । डाक्टरले ‘कोभिड–१९’ जाँच गराउनु पर्छ भन्दै ‘लेव’ तिर लिएर गए । जचाए पछि त साच्चै नै ‘कोभिड–१९’ भएको भेटियो । आमा छोरी डरले थुरथुरि हुन थाल्ये । के गर्नु र कसो गर्नु केही भेउ नपाउने जस्ता भए ।
त्यत्तिकैमा डक्टरले, “अब बाबुलाई क्वारेन्टाइन सेन्टरमा भर्ना गर्नुपर्छ, तपाईँहरु घर फिर्ता जाँदा हुन्छ । उहाँको हेरचाह हामी गर्छौं” भने । तर छोड़ेर फर्किनु कसरी ? आमा र छोरी बिलखबन्दमा परे । तैपनि मुटुमा ढुङ्गो राखेर घर फिर्ता हुन आँटे । मन मान्दैन पाइला चल्दैनन् । निरुपाय भएर छोरीले फेरि सोधिन्, “के–कस्तो होला डक्टर साहेव..? कति दिन राख्नुपर्छ ?” उनलाई बाबु अर्काको हातमा सुम्पिदाँ दिएर जान मन छैन । तैपनि खेरि खेरि सोध्दा डक्टर भन्छन्, “सात दिन पछि जाँच गर्दा मात्र थाहा पाइन्छ अनि हामी हजुरहरुलाई खबर दिन्छौं ।”
डाक्टर नर्सले दिन रात एकाएक गरेर चिकित्सा गरे । तर केही सीप चलेन । चार दिन पछि रत्नेदाईको देहान्त भयो । हेरत.. कस्तो बिडम्बना ...त्यसै दिन छोरीको १२ कक्षाको रिजल्ट निस्कियो । उनी ९० प्रतिशत नम्बर लिएर पास भएकी रैछिन । यता अस्पतालबाट बाबुको शव ल्याएर आँगनमा तुलसाको मठ नेर राखेको हुन्छ ।
छोरी सरासर भित्र जान्छिन् र उनको मार्कसिट ल्याएर बाबुको छातीमा राखेर रुँदै भन्छिन्, “बाबु .... तपाईं मेरो जन्म दिनमा आशीर्वाद दिँदै भन्नु हुन्थ्यो, राम्रो रिजल्ट गर्नु । आजको विद्यार्थी, समाज तथा देशको भविष्य हो । तिमी मेरो सपना हौ, अन्यायको अघि नझुक्नु र सत्यमा कहिल्यै पछि नसर्नु भनेर । हेर्नु आज मैले राम्रोगरि पास गरे । तपाईँ हामीबाट टाढिएर गएता पनि ‘म’ तपाईंको सपना निश्चय साकार गर्ने छु । तपाईंको आशीर्वाद शिरोधार्य छ ।”